DF Soomaaliya oo ka hadashay kulanka Xasan iyo Netanyahu.!! - Caasimada Online
Home Warar DF Soomaaliya oo ka hadashay kulanka Xasan iyo Netanyahu.!!
DF Soomaaliya oo ka hadashay kulanka Xasan iyo Netanyahu.!!
Muqdisho (Caasimada Online) – Caasimada Online ayaa 21-kii June qortay xog gaar ah oo ku saabsaneyd in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu socdaal qarsoodi ah ku tagay magaalada Tel Aviv ee Israel, lana kulmay ra’iisul wasaare Benjamin Natenyahu.
Wargeyska kasoo baxa Israel oo lagu magacaabo Times of Israel ayaa shantii bishan July xaqiijiyyey xogtii Caasimada Online, shaaciyeyna inuu dhacay kulanka Xasan Sheekh iyo Natenyahu.
Haddaba wasaaradda arrimaha dibedda Soomaaliya ayaa soo saartay warsaaxafadeed ay kaga jawaabeyso warbixinta Caasimada Online ee kulanka Xasan Sheekh iyo Natenyahu.
Xilli Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay qiimeyneyso dhammaan bahda ay dana wadaaga yihiin, ayna ku dadaaleyso u saldhigidda xiriiro macna leh wadamada isbaheysiga ah iyo kuwa cusub, iyadoo ujeedka yahay hubinta horumarka iyo barwaaqada mustaqbalka Soomaaliya , Wasaaraddu waxa ay xaqiijineysaa in kulanka la sheegay ee dhexmaray Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaaraha Israel aanu qabsoomin.